Hery - Tsiky dia ampy | Sary |
Fikafika vitsivitsy rehefa maka sary
2015-03-18 @ 17:07 in Kanto, Sary
Sendra hitako tao amin'ny Google+ ka zaraiko eto indrindra ho an'ireo izay vao manomboka maka sary tahaka anay. Hahitana ireo fikafika madinika hahafahana mamoaka ny tena hevitra rehefa maka sary. Amin'ny faran'ilay video dia miteny ilay nanao azy hoe ny fitsipika voalaza ato dia tsy voatery harahina satria indraindray ny fientanam-po koa no tena hahitana ny hevitry ny sary fa tsy ny fitsipika.
Hitako tokoa fa misy zavatra vitsivitsy mifanohitra ilay fitsipika. Ohatra ilay hoe "Rule of thirds" sy ilay "Symetrie", dia ilay "Dominant eye" sy ilay "Symetrie" koa. Fa na izany na tsy izany dia betsaka ny lesona azo tsoahina na dia fohy dia fohy aza ilay video. Isaorana ilay nanamboatra azy.
Long exposure voalohany
2013-05-17 @ 21:21 in Sary
Nivoaka alina omaly dia nanandrana an'izany hoe long exposure izany (na pause longue hoy ny frantsay). Atao miadana araka izay ilàna azy ny hafainganan'ny fakantsary, izany hoe avela hisokatra elaela. Niaraka tamin'ny mpaka sary pro dia mba nanandrana koa. Mbola ho ela vao mety fa (tohiny)
Voninkazo teny amin'ny ambassade
2013-04-25 @ 18:29 in Kanto, Sary
Tsy mikaonty ho anisan'ny lahatsoratra ity fa voninkazo fotsiny :-) Teny amin'ny ambassade malagasy eto Italia. Ireto avy ny voninkazo hitako teny teo am-piandrasana an-dRajoelina Toa lasa ho mpaka sarim-boninkazo ihany aho ity :-)
Ireto izao no Begonia semperflorens (tohiny)
Fleurs du Gazon d'Olympe
2013-04-24 @ 22:02 in Kanto, Sary
Nahita fika tamin'ny internet hanaovana macro mampiasa "Reversed lens" (objectif renversé?) indray aho. Izany hoe afototra ny objectif ka ny lohany no atao vodiny tongony :-). Mba hahafahana manao izany nefa dia mila adapteur adaptateur (efa hoe adaptateur fa tsy adapteur no fiteny) izay mora dia mora ao amin'ny ebay. Ny objectif mahazatra, grand angle, 18-55mm ihany no nampiasaina fa nafototra. (tohiny)
Voninkazo sy masoandro
2013-04-14 @ 08:32 in Kanto, Sary
Tsy misy lahatsoratra lava androany fa alahady... maka fy fotsiny ny hatsaran'ny zava-boahary.
Santatry ny lohataona 2013
2013-04-06 @ 11:01 in Kanto, Sary
Ela ny ela ka tonga ihany ny lohataona. Mbola hisy orana vitsivitsy ato ho ato fa ny zava-boahary efa nahafantatra mialoha ka efa nanomboka namoakan ny voniny. (tohiny)
Nanandrana sary low-key
2013-04-05 @ 12:43 in Kanto, Sary
Araka ny nambarako tamin'ny twitter-ko omaly dia nanandrana nanao sary nampiasa low-key lighting aho na low-key photography. Ny low-key photography dia fomba iray fakana sary izay mampiasa loharanon-kazavana mampivoitra ny aloka. Matetika dia atao mainty na maizina tanteraka ny "arrière-plan". (tohiny)
Droits d'auteurs, baiboly, serasera
2013-04-04 @ 14:19 in Kanto, Sary
Andrej Vasilenko A Girl and a Dog
Sendra namaky ny tantaran'ilay mpaka sary tsy matihanina anakiray antsoina hoe Andrej Vasilenko aho teo nalaina avy ao amin'ny "The Register". Raha fehezina ny tantara dia nisy an'io sary eo ambony io izay nalain'i Andrej Vasilenko tamin'ny taona 2007 tany no nanjary nalaza tampoka satria noheverina ho an'ilay mpaka sary malaza hoe Henri Cartier-Bresson. Nampitondrain'ny olona anarana hoe "A girl and a dog" moa ny sary tamin'izay. (tohiny)
Ny alatsinainin'ny Paka 2013
2013-04-03 @ 12:45 in Izaho sy ny ahy, Sary
Tany Monte Cassino izahay (Mont Cassin) no nitsangatsangana tamin'ity taona ity. Niaraka tamin'ny tao am-piangonana. Làlana mandeha any Naples, eo amin'ny adin'ny iray sy sasany teo. Adino koa ny nandrefy làlana satria tonga dia ambiance be ny teny ambony bus. Efa nandeha tany ihany ny tao am-piangonana tamin'ny roa taona lasa fa tamin'izany hono teny an-tampon-tendrombohitra. Tamin'ity kosa tety ambany ka nalalaka tsara ny fotoana na dia tsy nahita natiora tsara aza.
Sary avy amin'ny Marsa
2013-04-01 @ 10:00 in Sary
Tsy lainga fa tena afaka mandeha mijery ny planeta marsa ianao na dia 1er avril sahady aza androany. Tsy antenaina ho toeram-pitsangatsanganana ato ho ato akory ny planeta Marsa saingy mahaliana ity sary eto ambany nalefa avy any ity. (tohiny)
Objectif Zoom Hanimex 70-210 mm
2013-03-23 @ 21:23 in Izaho sy ny ahy, Sary
Tsy nisy objectif lava ny fakantsary reflex digital ampiasaiko (mbola EOS 350D). Tsara foana ny sary saingy vokatr'izay tsy dia afaka manalehibe zavatra lavitra. Mba hahafahana maka sary lavidavitra dia mila manana objectif mahataka-davitra kokoa, izany hoe lehibe kokoa ny Distance focale. Dia nitady tamin'ny internet fa hitako lafolafo daholo ilay izy raha vao mihoatra ny 200mm. Ny hevitra hita dia hoe hanandrana hampiasa an'ireo objectifs fampiasa amin'ny fakantsary Canon analogiques, izay mora kokoa, kanefa rehefa avy eo dia mila mividy adaptateur (fa tsy adapteur no fiteny) hahafahana mampiasa azy amin'ny EOS. Dia teo no nifanenako tamin'ity Hanimex 70-210mm ity izay novidina 30 Euros tao amin'ny Ebay.